New York (Caasimada Online) – Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta kulan xasaasi ah ka leh xaaladda Soomaaliya & doorashooyinka 2021-ka.
Fadhigan ayaa golaha ammaanka waxa ay uga doodi doonaan xaaladaha soo kordhay ee dalka, gaar ahaan muranka xoogan ee weli ka taagan hanaanka doorashooyinka.
Golaha ayaa si gaar ah diirada u saari doono ammaanka, doorashooyinka, siyaasadda iyo waqti kordhinta ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM.
Sidoo kale waxa ay warbixin ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ka dhageysan doonaan wakiilka gaarka ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan oo kulanka uga qeyb-galay hab maqal iyo muuqaal ah, isaga oo jeedin doono warbixinta dhabta ah ee dalka.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale la filayaa in ay bayaan kasoo saaray xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan maxaladda kala guurka ah ee lagu jiro.
Si kastaba kulankan ayaa kusoo beegmaya, iyada oo xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka ay golaha ammaanka u gudbiyeen qoraal la xiriira xaaladda dalka, gaar ahaan tabashadooda, waxayna dalbadeen in QM ay soo fara-geliso xaaladda Soomaaliya